Bakaylaha weyn ee bakaylaha: sifooyinka taranta
Waqtigan xaadirka ah, taranta taranta bakteeriyada waa guul - waa qayb ka mid ah dhaqaalaha qaranka, taas oo keeneysa faa'iido weyn. Xayawaanka ayaa kor loogu qaadaa dhogorta iyo hilibka cuntada. Hadda waxaa jira qiyaastii 90 nooc oo bakaylaha ah, kuwaas oo la siinayo kororka warshadaha xoolaha, iyo sidoo kale xayawaanka raba.
Waqtiyadii hore, ee Central Asia, markii dadka Turkiga lagu qasbay in ay raadiyaan dhul cusub oo cusub si ay u caddeeyaan noloshooda, waxay u baahan tahay baahida loo qabo mid cusub oo fardo ah oo ka sarreeya dhammaan dadka kale xawaaraha, dulqaadka, quruxda iyo xoogga. Inta lagu jiro muddadan, dhaqanka faraska waxaa dhashay. Tan iyo waagii hore ee qabaa'ilka reer Aasiyaanka ah ee ka soo horjeeda qabiilada Iiraan waxay faa'iido u ahaayeen dhammaan dhinacyada dhaqaalaha, marka laga reebo faragelinta faraha, Turkika xayawaanka ah ee jilicsan ee caleenta ah ayaa bixiyay isbeddel fardaha khayraadka faa'iido u leh labada dhinac.
Xilligii qarnigii 4aad, dhacdo weyn ayaa ka dhacday nolosha Baadaalka Carabta. Dagaalada joogtada ah ee Baadiyaha ayaa waxaa lagu dalbaday ciidamo dheeraad ah oo dheeraad ah, kuwaas oo lagu arkay inay ka baxayaan noocyo cusub oo fardo ah - Carab. "Ficilkii hore" ayaa ahaa mid daciif ah oo adag, sidaas darteed, ma ahan taageero la isku haleyn karo oo ah dagaallo joogto ah iyo dagaalo.
Badanaa, lo'da waxaa lagu hayaa beeraha beeraha si ay wax uga soo saaraan caanaha. Dabcan, tani ma aha ujeedada kaliya ee taas oo lo'dadan loo hayn karo, laakiin waa kan ugu faa'iido badan oo deggan. Nolosha bani'aadamka, waxsoosaarka caanuhu waa qayb ka mid ah cuntooyinka maalinlaha ah, marka lagu daro waxyaabaha caanaha laga soo saaro waxay muhiim u yihiin xubnaha jirka.
Lo'da Dutch, xaqiiqooyin xiiso leh ee caan this
Lo'da waa mid ka mid ah xayawaanka ugu horreeya ee guriga ku jira. Iyo in waqtigeena, xayawaankan waa ilaha wax soo saarka, labadaba caanaha iyo hilibka. Sidoo kale lo'da waxaa loo isticmaalaa shaqo adag. Cows laguma hayo oo kaliya beeraha waaweyn, laakiin sidoo kale guriga. Sida xayawaanka oo dhan, waxaad u baahan tahay inaad daryeesho lo'da, waxaad siisaa meel wanaagsan oo daaqsinka, hoyga diiran, iyo wixii la mid ah.
Doofaaro hilib-dufan ah: sharaxaad ka mid ah sifooyinka Mammurod
Xayawaanka noocan oo kale ah doofaarka waa mid aad u qadariya Ukraine, iyo dadka reer Ukraine ayaa had iyo jeer loo tixgeliyaa loona tixgeliyaa saloids. Maalmihii hore, hadhuudhku wuxuu ahaa il awood ah oo loogu talagalay dadka, kuwaas oo loo baahan yahay in dib loo soo celiyo ka dib markii shaqo adag, laakiin maanta waa saxan khaas ah. Malaha arrimahan oo dhan waxay ahayd sababta ay u ahayd jinsiyado Yukreeniyaan ah oo u horseeday inay soo saaraan mid ka mid ah noocyada ugu fiican ee hilibka iyo doofaarro dufan, oo lagu magacaabo Mirgorodska.
Waxaa ka mid ah noocyada kala duwan ee xoolaha ee xoolaha. Ganacsigani wuxuu keenaa kala badh dakhliga oo dhan xoolaha. Cuntada caanaha, hilibka, iyo sidoo kale warshadaha iftiinka warshadaha waxaa laga helaa xayawaankaas. Hilibka sifaha iyo hilibka digaaggu wuxuu tagaa booska labaad kadib doofaarka.
Gaariga waaweyn ee bakaylaha: rajooyinka horumarinta taranka
Dhirta shimbiraha waa shey qadiim ah oo si fiican loo horumariyey beeraha. Waqtigan xaadirka ah, waxaa jira qiyaastii sagaashan asal ah, khubarada ay u qaybiyaan "hilibka" iyo "dhogorta". Ugu dambeyntii, waa in ay midoobaan kooxda yar-yar iyo kuwa caadiga ah. Dalka gudihiisa, kooxdii ugu danbaysay waxaa badanaa la soo bixiyaa, oo ah wakiilka ugu caansan kaas oo ah bakaylaha waaweyn ee bakaylaha.
Doofaar weyn oo cad - awoowaha dhammaan noocyada
Doofaarrada cad ee waawayn ayaa ah kuwa ugu badan ee aan ku koobnayn oo keliya waddankeena, laakiin adduunka oo dhan. Waa cadahay in tani ay soo jiidatay jilciyayaashii doofaarka ee khibrad u leh ma aha midabkiisa, laakiin waxay muujinaysaa tilmaamayaasheeda. Maanta, doofaarku waa kuwa ugu caansan taranka, sababtoo ah waxay awood u leeyihiin heerka hidde-wadaha si ay u haystaan ​​dhammaan tayada ugu wanaagsan.
Beerta ugu wax soo saarka leh ee idaha leh ee Gissar
Beeraha xayawaanku ma aha mid caan ku ah qoysaska yaryar, inkastoo beeralay badani qiimo badan yihiin xoolahan. Ka dib oo dhan, idaha waa gebi ahaanba aan qabyo ahayn, cunaan cunto yar, siin jilitaan wanaagsan. Isla mar ahaantaana, hilibkooda ma aha keliya qiimaha muhiimka ah, laakiin sidoo kale dhogorta. Iyo jajabyo badan ayaa awood u leh in ay ururiyaan tiro badan oo ah baruur aad u qiimo badan.
Noocyada doogga jilicsan ee Duroc: waxaan ka dhigi karnaa doofaarka doofaarka fudud iyo toosan
Hilibka doofaarka ayaa aasaas u ah cuntooyinka badan, sidaas darteed tiro badan oo dad ah ayaa go'aaminaya inay bilaabaan doofaarka taranka guriga. Kiiskani ma aha mid khatar ah, gaar ahaan haddii aad dooratid jilicsanaanta saxda ah. Waxyaabo badani waxay ku xiran yihiin taranka - iyo waxqabadka ugu sarreeya, iyo sifooyinka quudinta, iyo xaaladaha xabsiyada.
Noocyada Vietnam-ka ah ee doofaarro ah
Doofaarka vietnam ayaa bilaabay inay noqdaan kuwo aad u caan ah oo dad badan oo la jecel yahay. Wadankeena, taranta noocaan oo kale ah ayaa bilawday dhawaan, laakiin, inkastoo ay taasi jirto, hadana waxaa jira warar is khilaafsan oo horeba. Si sax ah loogu yeero doofaarka caan ah ee loo yaqaan 'Asian or Vietnamese vislobryushaya'. Tani waa magaca ay ka heshay caloosha saggyada.
Dhammaan wixii ku saabsan quudinta bakaylaha: sida, goorta iyo sida loo siiyo cayayaanka guriga
Laga soo bilaabo barta aragtida ah ee uu taranka, bakayle waa xayawaanka guud. Его мясо считается диетическим и обладает прекрасными вкусовыми качествами, кроличий мех используется для пошива шапок, шуб и другой одежды, непригодные для этого шкурки служат сырьем для изготовления перчаток и даже обуви. Довольно распространенным является также декоративное выращивание кроликов.
Noocyo kala duwan oo ah merino
Idaha Merin waxay caan ku yihiin dhogorta caafimaadkooda. Waa mid aad u khafiif ah oo jilicsan, marka laga reebo, waxay awood u leedahay inay u adkaysato farqiga heerkulkiisu sarreeyo waxayna leedahay guryaha lidka bakteeriyada. Waxay ka timaaddo dharka dhirta kuleylka ah ee loogu talagalay waxqabadyada dibadda, ugaarsiga xilliga qaboobaha iyo kalluumeysiga, maxaa yeelay qofku wuxuu dareemi karaa raaxo iyaga heerkul ah laga bilaabo +10 illaa -30 ° C.
Waxa aad u baahan tahay si aad u ogaatid taranka xoolaha ee Merino
Lo'da Merin waa ido ganaax ah. Caadi ahaan waxaa lagu jajabiyaa jilicsan, iftiin, suuf qafiif ah oo aan hoos u dhicin. Inkastoo ay jiraan noocyo hilib. Aynu fahmno sifooyinka ay ka kooban yihiin, daryeelka iyo dhalida. Ma taqaanaa? Xagga qarniyadii XII-XVI, Spain waxay ahayd waddanka kaliya ee jilicsan.
Isticmaalka digada lo'da sida bacriminta
Lo'da lo'da - xayawaanka lo'da, waxaa loo isticmaalaa sidii dhismo, sida biofuel, soosaarka waraaqaha iyo xataa biogas. Laakiin inta badan, dabcan, tani waa bacriminta organic cajiib ah. Waxay ku habboon tahay noocyada dhirta oo dhan: geedo geedo waaweyn ah, iyo khudradda (kordhiya dhalidda dalagyada caleemaha), iyo berry.
Sida loo isticmaalo digada doofaarka si bacrimiya beerta
Milkiilayaal badan ayaa xiiseynaya sida aad u isticmaali karto digada doofaarka si ay u bacrimiso beerta. In this article waxaan ka hadli doonaa isticmaalka labada digada doofaarka cusub iyo humus, waxaan kaa caawin doonaa inaad si habboon u bacrimiya ciidda ama iska tuur of harta. Ma awoodaa in la isticmaalo digada doofaarka sida bacriminta? Digada lo'da, iyo sidoo kale qashinka lo'da (lo'da) ama digaagga, waxaa loo isticmaalaa dharka ugu sarreeya dhirta.
Sida loo bacrimiyo beerta khudradda leh digada idaha
Of dhammaan noocyada Bacriminta organic, digada waa ugu caansan. Waa isku dar ah dareeraha iyo xajmiga adag ee geedaha beeraha. Bacriminta waxtarka leh ee ugu waxtarsan waa digada lo'da. Sida loo sameeyo bacriminta iyo waxa faa'iidooyinka, waxaan ka fiirsanaynaa maqaalkan. Digada Qoyaan: Bacriminta Qoyaanka Daaqa xayawaanku leeyahay heerkul aad u sarreeya, sidaas awgeed waxaa badanaa loo isticmaalaa in lagu bacrimiyo dhoobo culus ama loamy dhulka.
Qof kasta oo leh raaxo leh gurigiisa gaarka ah ama cariishada ayaa si dhakhso ah ama ka dib u yimaada fikradda - iyo haddii aanan haysan wax guri ah oo nool: Digaagga, shimbiraha, baaskiilada, iyo wax yar ka yar inta ugu fiican! Oo hadda wax walba diyaar ayuu u yahay - diyaargarow habeenkii, dabaasha socod, quudinta qudaarta, iyo shimbir shimbiraha ayaa la keenay. Shimbirta ayaa koreysa, miisaankuna wuu kordhaa, waxayna timaadaa wakhtigii ay u adeegi lahayd, gacmo koray, miiska.
Doorashada qafis for bakaylaha iyo sida loo sameeyo naftaada
Beeralay badan oo xoolo dhaqato ah iyo ganacsatada gaarka loo leeyahay ayaa sii kordhaya dareenka ah ee taranka taranta. Kicinta xoolahan xayawaanku waa wax faa'iido leh. Haddii ay suurtogal tahay in habkan loo dhigo, waa wax aan qarsooneyn, sababtoo ah qashinka bakaylaha waxaa lagu qiimeeyaa beeraha bacriminta. Noocyada baqashada loogu talagalay bakayleyda Ka ilaalinta bakaylaha baqshiinka waa ikhtiyaarka ugu haboon ee adiga iyo xayawaanka.